India inoda kuti UK ibvise voga voga maIndia akabaiwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UK Kuputsa Nhau » India inoda kuti UK ibvise voga voga maIndia akabaiwa
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • India Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau
Iwo mutemo, uyo unoraira mazuva gumi ekuzvisarudzira kune vafambi vanosvika kubva kuIndia, inoshandawo kune dzimwe nyika zhinji vachishandisa Covishield, kusanganisira mazhinji eAfrica.
Vakadzi vakazara vakabaiwa kubva kuIndia vachiri kudiwa kuti vaende kune gumi-zuva reCOVID-10 kuvharirwa.
Mushonga weCovishield wakagadzirwa pamwe chete neOxford University uye AstraZeneca uye unogadzirwa neSerum Institute yeIndia.
MaBriton akabaiwa majekiseni eUK neyakafanana maIndia akagadzirwa majabha haadiwe kuisa wega.
United Kingdom yakazivisa kuti ichazorodza COVID-19 denda rakapfachukira kune vachengeti vekunze vashanyi vekunze kutanga kutanga kwemwedzi unouya.
Asi rondedzero yenyika dzine majekiseni anobvumidzwa haisanganisi India, kunyangwe nyika ichishandisa vhezheni yemushonga weAstraZeneca yakagadzirwa muUK, uye inokonzeresa kusagadzikana kwezvematongerwo enyika uye kutyisidzira kwekudzorera kubva kuvakuru veIndia.
Mushonga weCovishield, wakagadzirwa pamwe chete neOxford University uye AstraZeneca uye inogadzirwa nePune-based Serum Institute yeIndia, haina kuzivikanwa neUnited Kingdom pasi pemutemo mutsva kunyangwe iri hunyanzvi hwakafanana nemadhiwo akapihwa mamirioni eBritain.
The AstraZeneca jekiseni rinoumba mizhinji mizhinji yakapihwa maIndia kusvika zvino. Chiverengero chidiki chakatora mushonga wechivanhu wakagadzirwa neBharat Biotech, iyo isiri kushandiswa kuUK.
Gurukota rinowona nezvekunze reIndia rakurudzira zviremera zvehurumende yeBritain kuti "kugadziriswa kwekutanga kwenyaya yekuparadzaniswa" nemaIndia anoshanyira iyo United Kingdomm vachiri kudiwa kuti vaise vanhu kwavo vega kunyangwe vakabaiwa zvakakwana.
Mitemo mitsva yekupinda, ayo akatanga kushanda muna Gumiguru, vakatsamwisa maIndia mazhinji, avo vakapomera chisarudzo ichi serusarura. MaBriton akabaiwa majekiseni eUK neakafanana maIndia akagadzirwa majabha haadiwe kuisa wega.
"Takurudzira kugadziriswa kwenyaya yekuisa vanhu voga pachivande," akadaro Gurukota rezvekunze, Subrahmanyam Jaishankar muTwitter nhasi mushure memusangano nemumwe wake weBritish Liz Truss kuNew York, uko vese vari kuenda kuUnited Nations General Assembly.
Kuita kweBritain uku kunogona zvakare kukonzera kutsiva kubva kuNew Delhi, nemumwe mukuru wehurumende yeIndia achiti zvinogona kutora matanho ekudzosera kana nyaya ikasakurumidza kugadziriswa.
"Nyaya hombe ndeyekuti, heino mushonga wekudzivirira - Covishield - chinova chigadzirwa chakapihwa marezinesi chekambani yeUK inogadzirwa muIndia yatakapa madhora mashanu kuUK pakukumbira kwehurumende," Munyori wekunze weIndia, Harsh Vardhan Shringla akaudza vatori venhau muNew Delhi.
Achidaidza kusazivikanwa kweCovishield "mutemo wakasarura", akati kutaurirana kuri kuenderera mberi neUK pamusoro pezvitsva zvinodiwa.
"Asi kana tisingagutsikane tinenge tave mukodzero dzedu dzekutora matanho ekudzorera."
British High Commission muNew Delhi yakati UK iri kushanda neIndia kugadzirisa nyaya iyi.